Iskaashiga IWCA Online – Ururka Xarumaha Qoraalka Caalamiga ah
Wadashaqeyn: Maarso 9, 2022
1:00-5:00 galabnimo EST
Tag meesha Goobta xubinta IWCA in la isdiiwaangaliyo
Waxaa lagugu martiqaadayaa inaad soo gudbiso soo jeedinta iskaashiga IWCA Online-Wicida soo jeedinta waa hoos. Marka aan sii wadno la tacaalidda masiibada iyo saameynta ay ku leedahay shaqadeena iyo samaqabkayaga, waxaan rajeyneynaa in maalintaan wadajirka ah ay nagu siin doonto rajo iyo xoog, fikrado iyo isku xirnaan.
Wicitaankeeda Axdiga Sannadlaha ah ee CCCCs 2022, Guddoomiyaha Barnaamijka Staci M. Perryman-Clark waxay nagu casuuntay inaan ka fikirno su'aasha, "Maxaad halkan u joogtaa?" iyo in la tixgeliyo dareenka lahaanshaha ee inaga iyo ardaydeena laga yaabo ama laga yaabo inaynaan ku haysan meelahayaga.
Markaan sii wadno socodka cudurka faafa ee COVID19 ee inagu haya, mar kale u guuraya shir online ah, ka daalay macluumaadka aan iswaafaqsanayn iyo kuwa iska soo horjeeda iyo siyaasadaha ku saabsan waji-xidhka, tallaalada, iyo shaqada guriga - sidee uga jawaabnaa martiqaadka Perryman-Clark ee ah inuu iska caabiyo, si aan u noolaado. , in aad wax cusub abuurto, oo aad horumarto? Sideen uga qaybqaadan karnaa "shaqada geesinimada leh ee muhiimka ah oo ku jirta geeddi-socod"? (Rebecca Hall Martini iyo Travis Webster, Xarumaha Qoraalka sida Goobaha geesinimada leh: Arrin Gaar ah oo Hordhac ah Dib u Eegista Faca, Volume 1, Issue 2, Day 2017) Qaab cusub oo isku-dhafan, khadka tooska ah, farsamada casriga ah, iyo umeerinta fool ka-ka-foolka ah, sidee bay xarumaha iyo adeegyadu ugu sii furnaan karaan dhammaan ardayda? Wadashaqeynta khadka tooska ah ee IWCA 2022, soo jeedinta ayaa lagu martiqaaday iyadoo la adeegsanayo su'aalaha soo socda sida boodhadhka guga:
Sidee ayay u egtahay shaqada caddaaladda bulshada ee xarumahayaga? Yaa dareemaya in lagu casuumay meelahayaga yaase aan samayn? Maxaan sameyneynaa si aan u hubinno badbaadada shaqaalaheena, ardayda aan u adeegno? Maxaan sameyneynaa si aan u sameyno wax ka badan badbaadada, laakiin si aan u horumarno?
2022 IWCA Iskaashi Online ah, waxaan ku martiqaadeynaa soo jeedinta fadhiyada diirada saaraya in midba midka kale ka taageero qaabeynta iyo tijaabinta, diiradana saaraya habka, maaha wax soo saarka, cilmi baarista. Fadhiyadu waa inay sameeyaan mid ama ka badan kuwan soo socda:
Ku martiqaad ka qaybgalayaasha saaxiibadaa inay maskaxdooda ka fikiraan, qiyaasaan, ama ay horumariyaan fikradda meelaha/jihooyinka suurtagalka ah ee qorista cilmi-baarista xarunta ee ku saabsan ka mid noqoshada
Ku hag ka qaybgalayaasha siyaabaha loo isticmaalo cilmi-baarista xarunta qoraalka si ay si wanaagsan u qabtaan baaxadda shaqada aan qabanno, taasoo ka dhigaysa sheekooyinkayaga kuwo soo jiidanaya dhagaystayaal badan oo aan ku hawlannahay gudaha iyo dibadda goobaha hay'adaha.
U ogolow ka qaybgalayaasha inay hal abuur ku sameeyaan cilmi-baarista xarunta qoraalka, oo ay ku jirto ka-hortagga xaddidnaanta ama arrimaha la xiriira lab, caddaan, karti, iyo caadooyinka gumeysiga ee akadeemiyada
La wadaag shaqooyinka socda si ay jawaabaha uga helaan xirfadlayaasha kale ee xarunta qoraalka iyo macallimiinta
Ku hag ka qaybgalayaasha siyaalo aan ugu beddeli karno hamigooda wanaagsan ee ku saabsan ka-qaybgalka iyo ka-hortagga cunsuriyadda tallaabooyin la taaban karo oo waxqabad
Ku hag ka qaybgalayaasha inay maskaxdooda ka fikiraan oo u qorsheeyaan sida booskayaga qoraalka, qaabka, iyo/ama hadafkayaga uu isu beddeli karo markaan u soconno sida COVID u saameeyo goobta shaqada
Ku martiqaad ka qaybgalayaasha inay horumariyaan qorshayaal hawleed ay iskaga caabiyaan, si ay u badbaadaan, si ay wax ugu soo kordhiyaan, oo ay u horumaraan
Waxa laga yaabaa in la sheego in xoogga goobtayagu uu yahay dabeecadeena iskaashiga-waxaan ku martiqaadaynaa ka qaybgalayaasha inay isu yimaadaan si ay u qoto dheereeyaan fahamkeena-iyo ka-qaybgalka-kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo isku-dhafka meel kasta oo ay joogaan xarumaha qorista.
Sababtoo ah Iskaashigu wuxuu ku saabsan yahay in la isku taageero qaabaynta iyo tijaabinta, soo jeedintu waa inay diirada saaraan habka, maaha wax soo saarka, cilmi baarista; Waxaan u keydinay hal qaab oo gaar ah—“Dash Data”—tiro xaddidan oo soo jeedin ah kuwaas oo diiradda saaraya wadaaga natiijooyinka cilmi-baarista. Dhammaan soo jeedinta, iyadoon loo eegin qaabka, waa inay isku dayaan inay ku saleeyaan shaqada gudaha qoraalka deeqda waxbarasho iyo/ama deeqaha waxbarasho ee qaybaha kale.
Workshops (50 daqiiqo): Fududeeyayaashu waxay hoggaamiyaan ka qaybgalayaasha gacma-qabasho, hawlo khibrad leh si ay u baraan xirfado la taaban karo ama xeelado la xidhiidha cilmi-baarista xarunta qoraalka. Soo jeedinta aqoon-is-weydaarsiga lagu guulaysto waxa ka mid noqon doona wakhti lagu ciyaaro fikrado aragtiyeed ama ka tarjumaysa waxtarka hawsha ama xirfadaha la helay ( dood koox-weyn ama yar yar, jawaabo qoraal ah).
Kulamada wareega ah (50 daqiiqo): Fududeeyayaashu waxay hogaamiyaan dood arin gaar ah oo la xiriirta cilmi baarista xarunta qoraalka; qaabkan waxa ku jiri kara hadallo gaagaaban oo ka imanaya 2-4 soo-bandhige oo ay ku xigto ka-qaybgal/la-shaqeyn firfircoon oo la taaban karo oo lala yeesho ka-qaybgalayaasha oo ay keento su'aalo hagitaan ah.
Wareegyada Qorista iskaashiga ah (50 daqiiqo): Fududeeyayaashu waxay hagaan ka qaybgalayaasha hawl-qorista kooxeed loogu talagalay inay soo saaraan dukumeenti ama agab la wada qoray si ay u taageeraan ka mid noqoshada.
Wadahadalada wareega Robin (50 daqiiqo): Fududeeyayaashu waxay soo bandhigaan mawduuc ama mawduuc waxayna u habeeyaan ka qaybgalayaasha kooxo yaryar oo kala go'a si ay u sii wadaan wada hadalka. Iyadoo la tixraacayo tartanka "wareega wareega", kaqeybgalayaashu waxay bedeli doonaan kooxaha 15 daqiiqo ka dib si ay u kordhiyaan oo u balaadhiyaan sheekadooda. Ka dib ugu yaraan laba wareeg oo wada hadal ah, fududeeyayaasha ayaa dib isugu yeeri doona kooxda oo dhan si ay u soo gabagabeeyaan dooda.
Soo bandhigida Dash Data (10 daqiiqo): U soo bandhig shaqadaada qaab 20×10: labaatan slides, toban daqiiqo! Beddelka cusub ee kalfadhiga boodhka waxa uu siinayaa goob ku habboon hadal kooban oo dhegaystayaal guud ah oo ay weheliso agab muuqaal ah. Dash-ka Xogta ayaa si gaar ah ugu habboon ka warbixinta cilmi-baarista ama soo jeedinta dareenka hal arrin ama hal-abuurnimo.
Aqoon-is-weydaarsiyada shaqada-ku-socda (ugu badnaan 10 daqiiqo): Kulamada ku-meel-gaadhka ah (WiP) waxay ka koobnaan doonaan doodo wareeg ah halkaas oo soo-jeediyeyaashu ay si kooban uga doodaan mashruucyadooda cilmi-baarista ee hadda ka dibna ay jawaab-celin ka helaan cilmi-baarayaal kale oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha doodaha, soo-jeediyeyaasha kale ee WiP, iyo goobjoogayaasha kale ee shirka kuwaas oo ku biiri kara dooda.
Soo gudbinta: Febraayo 20, 2022
Si aad u soo gudbiso soo jeedin iyo si aad isu diiwaan geliso Iskaashatada, booqo https://iwcamembers.org.
Su'aalo? La xidhiidh shirka mid ka mid ah kuraasta, Shareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu ama John Nordlof, jnordlof@east.edu.